WAR CUSUB: Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha DF Somalia oo ku sii jeeda Garoowe & Mase yahay Musharax M/weyne doorashada 2019 ee Puntland – Puntlandtimes
WAR CUSUB: Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha DF Somalia oo ku sii jeeda Garoowe & Mase yahay Musharax M/weyne doorashada 2019 ee Puntland
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee Puntland ayaa sheegaya in uu maanta magaaladaas dib ugu laabanayo Wasiirkii hore ee wasaaradda Arrimaha gudaha, Dibu heshiisiinta & Faderaalka ee DF Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, isagoo maalmihi u dambeeyey ka mid ahaa shaqsiyaadka aadka looga hadal-hayey in ay musharaxiin u noqonayaan Madaxweyne-nimada Puntland.
Wararku waxay sheegayaan in soo dhaweyntiisa ay dad badan uga diyaar-garoobeen magaalada uu ka soo jeedo ee Garoowe, halkaas oo uu ku leeyahay taageerayaal kala duwan, waxaana imaanshihiisa Garoowe ay qeyb ka tahay arrimaha siyaasadeed.
Mr, Juxa ayaa xubin ka ah madasha Puntland FOCUS Group oo ay ku mideysan yihiin Siyaasiin & Musharaxiin ka soo horjeeda Xukuumadda hadda jirta ee Puntland, gaar ahaana xagga fikirka oo aysan ku qanacsaneyn sidda ay wax uga socdaan.
Siyaasigan wuxuu horey u soo noqday wasiirka Waxbarashada ee Xukuumaddii Faroole, isagoo xiligaas kamid ahaa shaqsiyaadka inta badan la rumeysan yahay in ay xariir dhaw la-lahaayeen Madaxweynihii xiligaas, wuxuuna horey u soo ahaa Sarkaal ka tirsan Hay’adda Cilmi Baarista & Horumarinta Puntland ee PDRC.
Juxa wuxuu si wanaagsan siyaasadda saameyn ugu yeeshay xiligii kala guurka ee Dawladdii KMG ahayd, xiligaas uu Madaxweynihii Puntland u xilsaaray arrimaha la xaajoodka dawladda Faderaalka, wuxuuna xubin firfircoon ka ahaa saaxiibadii aadka ugu dhawaa Madaxweyne Faroole.
Warar hoose ayaa sheegaya in Cabdi Faarax ayaa aad iskugu dhaw yihiin mid kamid ah ragga aadka loo saadalinayo in uu ku guuleysto doorashada nagu soo aadan ee 2019-ka, isagoo noqonaya mid kamid ah garbaha Musharaxan.
Loolan adag ayaa loo galayaa Madaxtinimada Puntland ee 2019-ka ayaa ah mid xiiso badan, waxaana ku tartamaya xubno kala duwan oo ay ku jiraan wasiiro horey xilal uga soo qabtay mandiqada, iyadoo ay socdaan dadaalada la xariira in hardanka doorashadu uu ka duwanaada kuwii horey uga dhici jiray gobalada Puntland.
Madaxweyne labadelo waxba keeni mayso waxaa muhiim ah in nidaam qaybihiisu shaqaynayaan la sameeyo, taasna waxay ubaahan tahay in shir guud la qabto dadka qaybihiisana laga wada qayb geliyo. Madaxweyne rabaa ma jiro maxkamad ama barlamaan talada la wadaaga.